भिम रावल पुरानै गुटमा सहभागी,ओलिलाइ फेरि किन दिए धोका? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
भिम रावल पुरानै गुटमा सहभागी,ओलिलाइ फेरि किन दिए धोका?
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक जारी छ । उक्त बैठकमा उपाध्यक्ष डा. भीम बहादुर रावल पनि सहभागी भएका छन् । यसअघि रावल नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् ।
पार्टीभित्रको अन्तरविरोध चुलिँदै गएपछि दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले एकताको लागि दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले दबाब दिएका छन् । आजमात्रै पनि यसअघि कार्यदलमा रहेका सदस्यहरुले सांसदहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
सकियो सत्ता गठबन्धनको बैठकः के भयो निर्णय ?
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् तत्काल विस्तार गर्ने समझदारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरुको बैठकले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय भएको काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।‘आजको बैठकबाट तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ’, बैठकपछि उनले भने, ‘अब धेरै समय कुर्नु पर्नेछैन ।’
यस्तै बैठकमा गठबन्धनको तर्फबाट सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेबारे पनि छलफल भएको छ भने त्यसबारे गृहकार्य गरेर मूर्तरूप दिइने खड्काले जानकारी दिए । यस्तै प्रदेश प्रमुख र विभिन्न निकायमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि शीर्ष नेताहरुबीच सामान्य छलफल भएको छ ।
यसलाई अन्तिम रुप दिन आजै शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्ने खड्काको भनाइ छ । बैठकमा काँग्रेसबाट प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी थिए ।
यस्तै माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, एमालेको माधव नेपाल समूहबाट विजय पौडेल, जनमोर्चाबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायत सहभागी थिए ।